alaabada matoorka Warshadaha - Waxsoosaarka mashiinnada Shiinaha Shiinaha Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaasha
Annaga oo ah soo-saare khibrad leh oo ka shaqeeya Shiinaha, annaga oo ah YTO waxaan soo saari karnaa tiro balaadhan oo ah tractor wheeled, oo leh awood u dhexeysa 18 illaa 500HP ， Marka loo eego habka waditaankiisa, taraafikada curyaamiinta guud ahaan waxaa loo kala saari karaa 2WD cagaf iyo 4WD tractor. Mashiinka uu adeegsado, cagaf-cagaarka taayirrada ah waxaa ugu horeyn ka kooban 2 cagaf dhululubo ah, 3 cagaf cagaf-cagaf ah, 4 cagaf dhululubo ah iyo 6 dhululuub dhuuban. Sida ku xusan codsiyadeeda qaaska ah, cagaflaha waxaa loo qeybin karaa cagaf cagaaran ...
Dab & Dab-damis
YTO POWER waxay bixisaa dabka naaftada tayo sare leh iyo matoor biyo loogu talo galay macmiilayaasheena wata matoorada iska soo saarta, dabkeena iyo matoorkeena biyaha ayaa buuxin kara heerka Australia, Bariga Dhexe iyo Yurub, waxaan sameyn karnaa matoorka sida waafaqsan shuruudaha gaarka ah ee Macaamiisha. Bambooyinkeena naaftada ah ee naaftada ah ee ku habboon warshadaha iyo biyaha magaalada, biyo-baxa, oo si ballaaran loogu adeegsado waraabka beeruhu, ugaarsiga biyaha ama cabitaanno kale oo dabiici ahaan iyo kimikal ahaanba la mid ah biyaha saafiga ah. F ...
Isku-darka iyo Tijaabinta: Khadka safka koowaad ee fasalka 2. Qalabka Copco iyo Nidaamka Golaha. 3.AVL Nidaamka gubashada mashiinka dilaaga 4.Degida mashiinka tijaabada 5.Qaar sare iyo xarunta kontaroolada 6.Maxbaradka tijaabada gaaska matoor YTO POWER waxay bixisaa tayo sare YANGDONG iyo matoorrada matoorka ee YTO, nooc koronto oo kor u kaca 10kva ilaa 500kva, leh nooca furan iyo nooca aamusan, 50HZ iyo 60HZ. Faa'iidooyinka iyo astaamaha 1.Marjadaha is-soo saaray ee lagu hubinayo tayada la isku halleyn karo, qiimo weyn ...